Itoophiyaan biyya buqqaatota biyya keessaa hedduu qabdu jedhamte - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright IDMC
Goodayyaa suuraa Ji'oota 6 bara 2018 keessatti buqqa'an
Gidduugalli lammiilee biyya isaanii keessattii qe'eerraa buqqifaman to'atu IDMC jedhamu gabaasa isaa walakkaa waggaa kan bara 2018tiin qe'ee ofiirraa lammiilee buqqa'an qabaachuun addunyaarraa Itoophiyaan adda duree taate jedhe.
Akka gabaasa dhaabbata kanaatti Itoophiyaa keessa erga fulbaana bara faranjootaa 2018 qabee lammiileen miiliyoona 1.4 ta'an qe'ee isaniirraa buqqa'anii gargaarsa barbaadaa jiru.
Mana maree baqattootaa warra Norweeyitti Daayireektara naannoo kanaa kan ta'an Nigeel Triiks ''uummatni miiliyoona 1.4 ta'u qe'ee isaarraa buqqa'ee addunyaan irratti dubbachaa hin jiru. Addunyaan Itoophiyaa argaa hin jiru'' jedhan.
Maatiin walitti bu'iinsa baqa qe'eesaanii gadhiisan haala rakkisaa keessa jiru, deeggarsa gahaas argachaa hin jiran jedhu.
Image copyright Nashon Tado/NRC
Goodayyaa suuraa Aaddee Shuubboo Beksoo
Harki caalaan Namoota qe'ee isanii buqqa'an walitti bu'iinsa nannoo Geediyoo fi Gujii ta'us, haalli naannoo Somaalee fi daangaa Oromiyaa ammas lakkoofsa buqqaatotaa dabalaa akka jiru gabaasni kun eereera.
Tattaaffii mootumman nagaaf tasgabbii busuuf hojjechaa jiruun maatiin tokko tokko qe'ee isaniitti deebi'aa kan jiran ta'us manneen isaanii barbada'aniiru jedhamera.
Akka gabaasa gidduu gala kanaatti erga barrii 2018 galee Itoophiyaatti aanee lammiileen Siriyaa fi Dimookraatik Ripaablik Kongoo hedduun buqqa'uun sadarkaa lammaffaafi sadaffaarratti eeramaniiru.
Lammiileen miiliyoona 5.3 ta'an addunyaa guutuutti sababa walitti bu'iinsaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Miiliyoona 3.3 kan ta'an ammoo sababa balaawwan uumamaan qe'eerraa buqqa'aniiru.